Akhriso: War murtiyeed laga soo saaray kulankii wada hadalada dowlad federaalka Soomaaliya iyo Somaliland | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Akhriso: War murtiyeed laga soo saaray kulankii wada hadalada dowlad federaalka Soomaaliya...
Akhriso: War murtiyeed laga soo saaray kulankii wada hadalada dowlad federaalka Soomaaliya iyo Somaliland
War-murtiyeedka ayaa laga saaray shirkii shalay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalkaas uga furmay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland kaasi oo uu shir guddoominayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
Shirka ayaa ka qeyb galay ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya iyo xubno kale oo ka socday Midowga Afrika.
Shirka inta waxaa laga soo saaray war murtiyeed u qornaa sidan:
Iyada oo ku timid dadaal uu garwadeen ka yahay Madaxweynaha Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Jabuuti, iyo hoggaamiyayaasha gobolka ee ay ka mid yihiin:
Mudane Abiye Axmed Cali, Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya
Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
Mudane Muuse Biixi Cabdi, Madaxweynaha Somaliland
Waxaa kulan wadatashi ah lagu qabtay caasimadda Jabuuti bishan 14ka Juun 2020 si gacan looga geysto sidii hoggamiyeyaasha DFS iyo Somaliland ay dib ugu sii ambaqaadi lahaayeen wadahadalladii iyo xiriirka ka dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland.
Hoggaamiyeyaasha ayaa garawsan muhiimadda doorkii Jabuuti ay ku leedahay dadaallada nabad dhisidda iyo nabad ku soo dabaalidda gobolka.
Ka hor inta aan la iskugu imaan kulankan taariikhiga ah, waxaa hore u soo qabsoomay dhowr wadaxaajood oo natiijooyin badani aanay ka soo bixin.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxweynaha Somaliland waxay isla garteen in guddi farsamo oo ka kooban labada wafdi ay sii ambaqaadaan wadahadallada u dhexeeya labada dhinac, isla markaasna ay ka sii shaqeeyaan arrimaha wali dhiman ee la isla qaatay.
Kulanka ayaa sidoo kale soo jeediyay in Jabuuti ay noqoto madasha shirarka farsamo ee labada dhinac.
Waxaa lagama maarmaan ah in danta labada bulsho ay udub dhexaad u noqoto hanaankan wadahadal.
Kulankani wuxuu ku boorrinayaa dhammaan gobolka, qaaradda iyo hey’addaha caalamiga ah inay taageeradooda u muujiyaan hannaankan.
Kulanka ayaa ku qabsoomay Jabuuti, 14 June, 2020.